Jerome akasangana naCyril Lignac! - Kitchenware.com
Jerome akasangana naCyril Lignac!
28 February, 2018 • chef lignac • cyril lignac • lignac • chocolate salon • chokoleti saloni 2018 • chocolate salon • 2018 chocolate show • chocolate chocolate salon • chocolate saron tours 2018
Mugovera wevhiki wapera (23 pa 25 February 2018) yakaitwa chokoti chokuratidzira muTours (Indre-et-Loire) nekuvapo kweChef ...
Mukana weJérôme wepaiti yedu yepaiti Outilsdecuisine.com kuenda kunosangana Cyril LIGNAC :-)
Mugovera 23 February, 14h, uye atova nemutsara wakareba kunze ... uye kutonhora, kutonhora zvikuru !! Asi isu tinokurudzirwa kusangana naShe, kutengesa mamwe mashoko nemazano naye, tenga bhuku rake idzva kuti rive rakasayinwa uye risapedze nguva iyo pafoni. Uye zvechokwadi, makaro atiri, tinotya maziso edu (pakutanga) ezvo chokoti yakanakisisa mabasa oumhizha zvino kutinhira kwedu kunotyisa!
Kamwe tadzoka muimba yekuviga uye mushure mokubhadhara matikiti edu, tinoda kumhanya zvakare, iyo inotungamirira kuCyril LIGNAC. Mushure mekunge zvishoma zvishoma neawa nehafu pano tiri pamberi pake :-) Munhu ane hutano hwakashata, uyo anoseka, anosemwerera, anowinetsana, anonditungamirira (isu tava kuda kufanana!). Tinotaura patisserie pachena uyewo bhizinesi duku (asi richaramba rakavanzika!).
Muchidimbu purogiramu shomanana yekushinhana (tinofanira kusiya nzvimbo yevamwe) asi yakanaka kwazvo uye inobatsira. Cyril LIGNAC akatendeka kune chifananidzo chaanoita paTV kana mumasangano.
Pane imwe nguva yakadzoka kubva pamanzwiro edu kune zvigaro zvemuwonesi (isu tiriwo pano nokuda kweiyo!).
Patafura huru yakakomberedzwa ne cordon yekuchengetedzwa inoratidzira zvisikwa zvakanakisisa zvemakwikwi: dzose dzakanaka kupfuura dzimwe ...
Nokuti maitiro akawanda e "cerebral" akapiwa, akadai se "mararamiro echokoti muhutano" pamwe chete nevana vezvokudya.
Zviri pachena kurarama zviratidzo zvezvisikwa zvetikoroti uye / kana zvikafu:
Uye kupedzisa, tora chikwama ugare wakagadzirira kurora zvose pamwe chete aya marefu mashizha emakontiro etiroti, kupa michero yemiti, gluten pasina, chocolates yemirairo, zvifananidzo etc ... pane vamwe zvose zvinonaka!
Zuva rinosvika pakuguma, tichakwanisa kudzoka kunwa koroti yakanaka inopisa uye kuravira zvatinotenga, zvakanyanya gore rinotevera! Isu tinopedzisa nyaya ino naChef Cyril LIGNAC.
Kana iwe uchida kuwona mamwe mavhidhiyo nemavhidhiyo, tishanyire pakarepo pama-network network:
BASA ROKUDZIDZA KUI CYRIL LIGNAC ... .. Ini ndiri ndoga kuenda ku salon du chocolat ;;;; ndinoitwa kuti nditsaurire bhuku rake rekubika ... iye munhu akanaka kwazvo kutaura ... tinogona kutaura naye kunze kwokumuvhiringidza ... anotipindura nounyoro ... BRAVO KUYE ... uye ... JEROME PAMUSORO PAMWE NYAYA YAKANYAYA